Muhiimadda ay leedahay xasilloonida siyaasadda | KEYDMEDIA ONLINE
Muhiimadda ay leedahay xasilloonida siyaasadda
Waxaa maalintii labaad galay shir madaxeedka ka socda teendhda Afisyooni, shirkaan ayaa noqonaya midkii ugu buuqa yaraa tan iyo billowgi 2017, oo ay yeeshaan Madaxda Soomaalida.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ku dhawaad Todobo bilood, ka hor bilashada bisha aan ku guda jirno ee May, waxaa dalku ka jiray xasillooni darro siyaasadeed oo laba jibaarantay, taas oo sababtay kala aamin-bax dhan kasta ah, bur-bur dhaqaale, iska hor imaadka awoodo hubeysan iyo dagaallo ka qarxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dadka qaar ayaa rumeysan in tan iyo markii xilka Madaxweynaha dalka lagu wareejiyay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, uusan ka shaqeyn Xasilloni Siyaasadeed, iyagoo ku doodaya falal uu ku kacay intii uu talada haayay, kuwaas oo ay u sababeynayaan kala haadkii siyaasadda ee qarxay bartamihii bishii December sanadkii hore.
Halka ay gaartay xasillooni darrda aloosantay, qaar ka mid ah Madaxda Dowlad Goboleedyada, ayaa isku aamini waayay imaanshiyaha Caasimadda dalka, tas oo qasab ka dhgtay in ay amnigooda sugtaan, Wakiiladda Beesha Caalamkana ku qasbaan in Shirka Wada-tashiga lagu qabto goob ammaan ah oo la isku hallayn karo.
Madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa isku hallayn waayay xarumahoodii waxayna ugu danbeyn saldhigteen degaanno ay u badan yihiin dadka ay isku heybta yihiin, Maykda Madaxweyne Soomaaliyed ayaa la isku salaami waayay, cadow aan is fiirin karin ayaana la noqday.
Dhowr shir ayaa fishilmay, heshisyo hore ayaa hirgali waayay, amarda Farmaajo ayaa shaqeyn waayay, muddo korosi ayuu sameysatay, Baarlamaankii ayaa labo u kala jabay, Ciidankii qaranka ayaa labo saf noqday, Maamulladii ayaa kooxba meel ka soo jeesatay, taas oo sababtay in ugu danbeyn kacan ka hadal dhaco.
Muranka siyaasadda ee dalka qarka u saaray inuu sidii foolkaano u qarxo, ayaa hadda qabow, kadib markii RW Rooble lagu waareejiyay amniga iyo hoggaanka doorashooyinka, waxaana si niyadsami ah u socda Shir Maxeedka, taas oo dhalisay su’aaal ah: Fidnada ma Farmaajo ayaa waday?
Ma jiro buuq bannaanka yaal oo soo baxay tan iyo markii shirku billowday, looma baahan Beel Caalam, is gaashaan buureysi iyo is-baheysiyo cusub lama aadin, cabasho amni iyo cabsi gooni ah lama qabo, taas oo muujineysa muhiimadda ay leedahay Xasilloonida Siyaasadda.
Waxaa maalintii labaad galay Shirka, Ra’iisul Wasaare Rooble hoggaaminayo, waa billow ka duwan kuwii hore ee buuqa iyo qayladu ka soo yeeri jirtay, ee magaalada oo dhan ka dhigi jiray saxmadda miiran.
Masuul ka tirsan waftiga mid ka mid Maamullada dalka ee hadda Muqdisho ku sugan oo Keydmedia Online, la hadashay ayaa sheegay in jid uu Farmaajo ku fashilmay Afrartii sano uu hogganka hayay uu qaaday RW Rooble, kaas oo ah, kalsooni-dhis, is-cafis, is-aaminaad iyo wada-xaajood laab xaaran oo aan gadaal ka xirneyn.